Sendwithus: Dezie, Nnwale ma Tụọ Ọrụ Ntugharị Email | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu na-eziga ozi ịntanetị azụmahịa, ị nwere ike ịchọpụta na ha nwere koodu nzuzo na njedebe na-esikwa ike gbanwee na-enweghị enyemaka onye nrụpụta gị. Ozi ịntanetị azụmahịa bụ ozi ịntanetị e zigara ndị mmadụ na ị nwere njikọ aka na azụmahịa ma ha anaghị enwe ike irube isi n'iwu (nke ahụ pụtara na ha anaghị achọ njikọ wepu aha). Ozi azụmahịa ma ọ bụ ozi ịntanetị na-ebuli elu ma pịa site na ọnụego yabụ ọ bụ ezigbo ohere iji zụọ ndị ahịa gị mma iji melite njigide, bulie ma ọ bụ kuziere ha
Nke a bụ usoro ije ije nke nyiwe ha:
Ọ bụrụ na ịnwere itinye mgbanwe mgbanwe maka email ọ bụla dị n'ime, ị ga-ahụ etu ihe si eme ngwa ngwa. Zite ya bụ ezigbo onye nrụpụta ikpo okwu iji jikọta ozi ịntanetị enwere ike ịhazi ya, jikwaa ya ma soro ya na-enweghị mgbanwe mgbanwe ahụ. Gị Mmepụta dị nnọọ integrates na Sendwithus API iji kpọọ email ziri ezi ma ha mee nke ọzọ.
Zite ya Atụmatụ Platform
A / B Ule etinyere - ngwa ngwa nwalee echiche ọhụrụ na ọdịnaya.
Analytics - tụọ ozi ịntanetị nyefere, meghere, na njikọ ndị pịa.
Edezi Email - na-emelite ozi ịntanetị gị na mpụga na sistemụ gị.
Zite ya na-ejikọ ọtụtụ n'ime ọtụtụ email na-ezigara na ozi azụmahịa na-eziga - SendGrid, Ozi nke Rackspace, Mandrill, Eze na Ọrụ Email Dị Mfe Amazon n'ime igbe.
Tags: Ọrụ Email Dị Mfe Amazonnnukwu emailnnukwu ọrụ emailEzeOziMailgun site na RackspaceiwuSendGridizigaazụmahịa azụmahịa